| यौन (Sex) के हो ?
Wednesday, 17 October 2018 08:58 am, Nepal
मेचीकाली : 2018-06-13 14:49:02
••• प्रिय भान्जी जल शाह !
प्रेमा दिदीले यथार्थवादी धाराको जीवन बाँचिन् । समाजले उनका लागि गाढेको किलाको ओरिपरि घुमेर पशुतुल्य जीवन बिताउन पनि उनलाई मञ्जुर थिएन । अस्तित्ववादकी अनुसारिणीको सग्लो नाउँ नै प्रेमा शाह थियो । त्यसैले प्रेमा दिदीले आफ्नो जीवन आफ्नै ढाँचामा बिताउन मन पराइन् । यसैक्रममा उनले कति रगत बगाइन वा पसिना बगाइन् त्यसको नालिबेली उनले शायद तिमी बाहेक कसैसँग कहिल्यै कहिनन् । सदासर्वदा शिर ठाडो गरेर, मधुर मुस्कानका साथ समाज सामू देखा पर्ने उनको व्यक्तित्वका सामू जो कोही धेरै बेर उभिन पनि सक्तैन थिए । प्रिय जल !
अब रह्यो प्रेमा दिदीका दुई पतिको कुरा ! तिमी हामी हिन्दूहरूले महाभारतको कथा पढेका छौँ, त्यसबारेको चलचित्र पनि हेरेका छौँ । पाँच पति भएकी द्रौपदी पनि हाम्रै समाजकी आराध्या देवी छिन् । हाम्रै देशका कुनैकुनै भेगमा अहिले पनि बहुपति प्रथा छँदै छ भनिन्छ । पितृसत्तात्मक समाजद्वारा बहुपत्नी प्रथा स्वीकार्य र बहुपति प्रथा हटाइएको हो । मातृसत्तात्मक हालिमुहालीमा पुरुष पीडित हुनु र पितृसत्तात्मक हालिमुहालीमा स्त्री प्रताडित गरिनु पनि खासै अनौठो कुरा होइन; यो त सत्ताको खेल मात्र न हो । त्यसैले प्रेमा दिदीका जीवनमा आइपरेका यी बेहोराहरू पनि गौण हुन् । भगवान् र भगवती मानिएकाहरूको त यौन जीवन (Sex Life) स्वतन्त्र थियो भने हामी त उनीहरूकै अनुकम्पाबाट जन्मेका मानव हौँ । जल !
यौन (Sex) लाई मानवीय जीवनको अति प्रिय, अति आवश्यक र अति गौरवशाली शक्ति पनि मानिन्छ । विशिष्ट यौन समागमका विविध भङ्गिमा प्रदर्शन गरिएका मूर्ति र चित्रहरू हामीले पूजा गर्ने मन्दिरका टुँडालहरूमा समेत हामी देख्न सक्छौं । प्राचीन कालदेखि नै यौनका यी विविध गतिविधिहरू सावर्जनिक रूपमा प्रस्तुत गरिदै आयो । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो परम्परा, धर्म र संस्कृतिले पनि यौनलाई उच्चस्तरीय सम्मान दिएको छ । यी विविध बेहोराबाट के बुझ्न जरूरी छ भने सेक्स मानवीय जीवनको घृणित, अवाञ्छित र फोहोरी खेल नभएर यो एउटा पवित्र कलात्मक शैली हो । अझ शास्त्रीय अर्थको खोजी गर्ने हो भने यौनक्रिया परमतत्व प्राप्तिकै अर्को एउटा शाश्वत पथ पनि हो । प्रिय नानी !
एक छिनलाई हामी धर्म र संस्कृतिका कुरा पनि छाडिदिउँ । मानवीय सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक र जैविक आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा एउटा पुरुषबाट धोका पाएपछि अर्को पुरुषको चयन गर्नु आफैँमा त्यस्तो विवादको विषय पनि होइन । प्रेमा दिदीले पनि एकपटकको छललाई अर्कोपटक सच्याउन खोजेकी मात्र थिइन् । तर दोस्रो पटकको उनको जीबनसाथी भनाउदाले पनि उनको भावनासँग नराम्रो सँग खेल्ने कर्म गरेका थिए । एउटा धोका पछि अर्को धोका पाएपछि प्रेमा दिदीले आफ्नो जीवन आफ्नी छोरी अथवा भनौं तिमीमा समर्पण गरेकी थिइन् । प्रेमा दिदीको जीवनको तिर्खा मेटाउने कारणले नै होला दिदीले तिम्रो नाउँ नै ‘जल’ राखिदिइन् । वास्तवमा ‘जल’ सिँचेर नै हुनुपर्छ निरस हुनुपर्ने ७३ वर्षीय प्रेमा दिदीको जीवन रसिलो रह्यो । त्यसैले प्रेमा दिदीको व्यक्तित्वका विविध पाटामा देखापरेका विशिष्ट कोटीका विशेषताहरूमा रम्नुको साटो अनावश्यक टीकाटिप्पणीमा रुमलिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रिय भान्जी !
के दिदीले आत्मकथा लेखेर थन्क्याएकी छिन् र ? मलाई लाग्छ, लेखेकी छैनन् । पछि लेखेकी भए त मैले पनि सुइँको पाउन सक्थेँ होला । तर यति हो मलाई दिदीले उनको जीवन कथाका धेरै प्रसङ्ग भनिसकेकी थिइन् । धेरै दिनको कुरा रह्यो, कति मैले बिर्सेँ र कति सम्झेँ । जेजे भए तापनि सबै जोड घटाउ गरेर मैले उनको जीवनी तयार गरेँ । अहिले मलाई पछुतो पनि लागिरहेको छ, भान्जी ! यदि मैले उनको जीवनकालमा नै उनको जीवनी लेखेको भए मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो । दिदीकै मुखबाट मैले उनको सारा जीवन्त कथा सुन्न पाउने थिएँ । अनि मैले लेखेको उनको सिङ्गो जीवनीको किताब देखेरै उनी कति रमाउने थिइन् होला ! मेरो २० वर्ष जतिको साधनाको फल ‘नारीचुली’ हेरेर प्रेमा दिदी खुसी भएको म सम्झन्छु । ‘कस्तो राम्रो किताप !’ दिदीले ‘नारीचुली’ छापिएको सुनौलो अक्षर सुम्सुम्याएर भनेको कुरा मलाई त अहिले भरखरजस्तो पो लाग्छ । प्रिय जल !
मैले ‘विद्रोही प्राज्ञ : प्रेमा शाह’ लेखेँ । यो कृति मलाई लेख्न मन लागेकाले लेखेँ । दिदी कै स्नेह, आत्मीयता र विश्वास पाएको थिएँ र दिदीबाट मेरा कानमा खसेका कुरा नै मैले लेखेँ । साथै तिमीलाई सम्झेर पनि मैले तिम्री आमाको जीवनी लेखेँ । तिम्रो मप्रतिको स्नेह र विश्वासमा पनि मैले यो कृति लेखेँ । कति अधुरा कुरा तिमीबाटै टिपेर पनि मैले लेखेँ । जल नानी !
तिम्री माइजू अथवा भनौं मेरी पुरोधिका इन्दिराका कारणले पनि मैले आफ्नो जीवनी लेखन यात्रा बढाएँ र ‘विद्रोही प्राज्ञ : प्रेमा शाह’ तिमी र पाठकलाई समर्पण गर्न पाएँ । यस बेहोरामा मलाई गौरवीवोध पनि भएको छ । तिमीलाई माया गर्ने तिम्रो मामा